Sajhasabal.com | Homeआईफोन सेभेन र आईफोन-8 को मूल्य घट्यो, नयाँ आइफोनमा डबल सिम पनि !
आईफोन सेभेन र आईफोन-8 को मूल्य घट्यो, नयाँ आइफोनमा डबल सिम पनि !
भदौ २८, काठमाडौं | एप्पलको आईफोन सेभेन र आईफोन एटको मूल्य घटेको छ । साथै पहिलो पटक दुईवटा सिमकार्ड लाग्ने आईफोन सार्वजनिक भएको छ । एप्पलले बुधबार राति सनफ्रानसिस्कोमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा एप्पलको आईफोन एक्स एस, एक्स एस म्याक्स र एक्स आर मोडल सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार राति सार्वजनिक भएको एक्स एस र एक्स एस म्याक्समा डबल सिमकार्ड समेत सपोर्ट गर्नेछ । तीनवटै फोनमा फेस डिटेक्सनको फिचर भएकाले सुरक्षित मानिएको छ । आइफोन एक्सएस म्याक्स हालसम्मकै ठूलो स्मार्ट फोन भनिएको छ किनभने यसमा ६.५ इन्चको स्क्रिन छ । यस्तै आइफोन एक्सआरको स्क्रिन ६.१ इन्च र आइफोन एक्स एसमा भने ५.८ इन्चको स्क्रिन छ ।